Maxaa laga filan karaa kulanka berri ee Afisiyooni? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxaa laga filan karaa kulanka berri ee Afisiyooni?
Maalinta berri ah oo ku beegan 3da April, waxaa lagu wadaa in uu shir ka dhaco Teendhada Afisiyooni ee magaalada Muqdisho, haddaba maxaa laga filan karaa? Keydmedia Online ayaa diiradda saareysa kulankaas iyo natiijada laga filan karo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Berri oo Sabti ah taariikhduna ku beegan tahay 3da April 2021 waxaa shir horudhac ah oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ku yeelanaya Muqdisho madax ka socota dowladda federaalka, dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe iyo gobolka Benaadir.
Inkastoo shirkani qabsoomiddiisa ay soo jiitameysay muddo bil ku dhaw, haddana waxaa la isla gartay in shirku qabsoomo maalinimada Sabtida ah. Wajiyada ka qeyb gali doona shirka qaarkoo heshiis ma ahan, aad ayeyna ugu kala aragti duwan yihiin arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaan siyaasadda dalka, haddana waxaa laga sugayaa in natiijo wanaagsan ay ka timaaddo!
Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo iyo madaxweynayaasha mayalka adag ee Jubbaland iyo Puntland ayuu loollanka ugu adag dhex yaalaa, waxayna ku hardamayaan wax ka baxsan doorashada waqtigeeda la taagan yahay, haddana sidaas oo ay tahay waxay doonayaan iyagoo aan la heshiisiinin saddexdooda in ay isugu yimaadaan shir doorasho iyo mustaqbalka umadda Soomaaliyeed looga wada hadlayo!
Waxaa xaqiiq ah in uu baaqday shirkan wax ka badan 4 jeer ee uu iskiis u iclaamiyay Madaxweyne Farmaajo ayna ajiibeen saddexda Madaxweyne ee ku hoos jira gacanta ciidamada NISA, caasimadahoodana horay loo geeyay Haramcad welina ay ku sugan yihiin, waana ciidan uu Farmaajo u adeegsado doorashooyinka.
Qabsoomidda kulanka berri waxaa shaaciyay Wasiirka Warfaafinta xukuumadda Cusmaan Dubbe, maamullada ay is hayaan ee Jubbaland iyo Puntland ayaa iyagana saacado kaddib xaqiijiyay kulanka oo ku asteysan 3/April waxayna qabsoomidda kulankaasi uga mahad celiyeen xubnaha Beesha Caalamka oo ay sheegeen in ay dadaal ku bixiyeen sidii uu kulankaasi u qabsoomi lahaa.
Haddaba su'aasha dad badani isweydiinayaan waxay tahay; Muxuu noqon karaa natiijada kulan qabsoomiddiisii la isku raacay balse shaacintiisa iyo cidda leh dadaalka lagu qabanayo aan la isku waafaqin?
KON waxay qiimeyneysaa natiijada kulankaasi, waxayna qeyb ka tahay dadka qaba walaaca ku aaddan mira-dhalka kulankaasi, waxaana suurta gal ah:
In kulanka oo ku billowday muran uu dheeraado, waxaana sabab u ah in billowgiiba la isku qilaafay kulanka iyo cidda suurta galisay qabsoomiddiisa.
In tanaasul haddii aan la helin kulankaasi uu noqon karo mid dhicisooba oo natiijo aan wanaagsaneen laga soo sheego gaba-gabada kulanka.
In xubnaha beesha caalamka ee ka qeyb galaya shirka ay cadaadis saaraan dhinacyada isku haya ayaa waxay keeni kartaa in shirka natiijo wanaagsan laga maqlo.
Kulanka looga hadlayo muranka la xiriira doorashada ayey xubnaha Beesha Caalamku waxay ku cadaadinayaan saamileyda in ay isfahan ka gaaraan doorashada, lana meel mariyo heshiiskiu 17 -ka Sebtember 2020, waxay horay usheegeen in aan la aqbali doonin in Farmaajo uu iskiis uqabsado doorasho kaligiis ah, sidoo kalena mid ay mucaaradku sameystaan ayey ka digeen, waxayna ku celceliyeen in aan la aqbali doonin fowdo iyo qalalaase dambe ee Soomaaliya.
Natiijada kulanka berri laga filan karo oo aad ay u hooseyso rajadiisa ayey suurta-gal tahay in dhinac kamida dhinacyada loollanka ku jira uu tanaasulo, sidaasna doorasho lagu aado!